Susan akanditi anongonakirwa nemboro yangu chete | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Susan akanditi anongonakirwa nemboro yangu chete
Susan akanditi anongonakirwa nemboro yangu chete
Yainge iri weekend ndiri pa Fourways muJohannesburg, hameno kuti ndingaifananidze ne Borrowdale here but kunogara varungu vakawanda kunzvimbo iyi. Iyo yedu yekuda kugara kuma suburb iyi tichida hupenyu hwakanaka and nzvimbo iri quiet.
Ndaishandira zvangu mu area iyoyo and ndaigara ndichifamba neroad imwe chete every morning. Ndaiti makuseni ega ega ndichiyenda kubasa ndaigara ndichiwona rimwe babe raipota richiita jogging but jogging yacho yainge yakawoma ende ndaigara ndichivarairwa nekungowona babe iroro richifamba muroad. Mwana ainge aine chiuno chakareruka iyeye but hapana kana chandaiziva pamusoro pezvake.
Mumwe musi ndakazviti rega ndimirire paaigara achipfuura napo ndichiti zvimwe ndigaite lucky ndikagona kutaura naye. Pese pandaimuwona naiwona akapfeka gym clothes dzainge dziri tight zvekuti magaro ake aibva ati mba mba mba…kuita kunge yakanamatira paganda rake. Aizoti kana akufamba aiyita imwe swing yaimisa mboro apa waingowona vanhu varikupfuura nemota vachingotarisa vobva vaita smile zvavo vopfuura.
Mafambiro ayiita babe iri ka jogging kacho kainge kakawoma waitomisa mboro chete. Musi uyu ndakaita zvivindi ndakamirira pacorner ndirimumota mangu, ndaifamba ne Nissan Almera yainge iri yebasa bacause ndaiva driver we Uber and nebasa rangu ndaisangana nevakadzi vakawanga asi uyu mwana akandimisa mboro ndisati ndataura naye. Ndakatanga babe iri ndichiita kunge munhu arikutamba ndikabva ndamuti kosei uchifamba zvinonakidzira kudaro, akashaya zvekutaura ndokubva angosekerera achiyenda apa tight yainge akapfeka haaa ma1.
Magwana acho ndakamuwona futi ndikabva ndamuti haudi kuyenda neni here because uuummmhhh chiuno icho ndachifanirwa zvimwe ungandiratidze kuti chinoshanda sei, akaseka futi achibva ati hauzondigone uri mwana mudiki. Ndakaseka ndikati inini I like a good challenge saka wondiudza paunenge wavafree ndikuratidze zera rangu, izvi zvakaitika kwenguva refu kusvikira takunyatsowirirana. Ndakati rimwe zuva ndichisvika kumba kwake Susan ndakawona kuti munhu aingodawo zvakanaka thats why aigara kuvarungu.
Akandivhurira door ndokubva ndapinda mwana aive negaro rakanaka iyeye apa muviri wake wainge uri pakati nepakati zviya zvekuratidza kuti munhu aiyita workout every day but swing yake pakufamba ndiyo yakamisa mboro yangu kubva pakutanga ndosaka ndauya pano nhasi. Ndakavhurirwa gumbo ndikanzwa kunge munhu apinda pakati chaipo, ndatunda mubhurugwa mangu apa ndisati ndasvira. Pandikazoswedera padhure ndikabatiswa magaro ake ainge akaita round apa ari firm ndakaita kunge munhu abatwa nemagetsi.
Takasvirana makuseni iwayo kusvikira ndazoyenda kubasa mwana ayinaka iyeye mhani kuita kunge akaiswa sugar mukati mebeche rake. Nanhasi tinongosvirana pese patinenge tawana mukana asi akanditi haadi relationship neni anongonakirwa nemboro yangu chete. Handimbomire kumusvira Susan pese pandinenge ndapihwa makumbo.
kunakirwa nemboro yangu
Previous articleKamorning glory: Mazvamburiro andakaita babe rangu nemboro
Next articleNdakamusvira nyoro ndichiita sendichabvarura beche nekunakirwa